Indooniisiya oo talaalka Karoona si xikmadleh uga bilowday halka ku haboon - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Indooniisiya oo talaalka Karoona si xikmadleh uga bilowday halka ku haboon
Aduunka gaalada iyo wadamada Muslimka ah qaarkood ayaa bilaabay talaalka Karoona kadib markii ay soo baxeen daawooyin la tijaabiyay ay yaraynaya in qofku isbitaal u galo hargabka Karoona.
Waxay dhamaantood wadamada gaalada iyo Muslimka qaarkood ku bilaabeen talaalka dadka waaweyn halka dadka dhalinta yar la yiri waxay ku jiraan liistada xageeda dambe.
Indooniisiya oo tirada dadkeedu yahay 270 milyan oo Muslimiina ayaa qaadatey go’aan xikmadleh ayadoo talaalka ka bilaabaysa dadka dhalinyarada ah iyo kuwa shaqeeya oo uu ugu horeeyo madaxweynaha dalkaasi oo 59 jir ah.
”Dadka ka weyn 60 oo uu ku jiro madaxweyne ku xigeenka oo 77 jira waxay ku jiraan safka xagga dambe waayo looma arko inay mudan yihiin maxaa yeelay socodkooda ayaa yar ayuu yiri khabiir dhinaca caafimaadka.
”Waxaan rabnaa inaan talaalno dadka shaqaynaya ee melkasta galaya ee la kulmaya boqolka qof haddana gurigooda ku soo noqonaya inay helaan talaalka taas oo caqli ku dhisan halka gaaladu talaalayso boqol jirada.